Maxkamadah iyo mucaaradka mustaqbalka.
By Maxamed Xuseen Cadow.
Hadabo angoo ka cabir qaadaneyno inta aan ka maqalnay ururkaan la dhisi doono iyo dhibaatooyinka horyaalo iyo kuwa sugayo in ay xal u raadiyaan ayaa waxaa mudan in lays waydiiyo dhowr su,aalood oo kala ah.
Waxaa ila haboon in labo su�aalood jawaabtooda aan u dayno marka ururka la dhiso, kuwaas oo kala ah muxuu noqonayaa hadafka ururkan iyo dariiq noocee ah ayey u mareyaan in ay gaaraan hadafkooda.
Su�aasha ah yaa leh fikirka in la dhiso ururkaan, bal marka hore aanu eegno wax ay isku kordhin karaan hadii ay midoobaan. Aan ku bilaabo Maxkamadaha Islaamiga waxoo loo arkaa in ay yihiin dad ku midoobay aragti kan kooban dad badan isla markaana leh awood ciidan iyo sumcad gaarsiisan nambar aad u badan.
Hadaba waxaa dadka xaq u leeyihiin in ay iswaydiiyaan su�aal ah maxay ku soo kordhin karaan qaybahaan kale ay la midoobayaan Maxkamadaha Islaamiga . Si aan taas u fahno aan eegno xaalada ay ku sugan yihiin madaxdii Maxkamadaha, marka hore waxay marti u yihiin dowlada ay mabda iyo aragti ay la wadaagin waxaan ognahay in Isaias Afewerki uu la dagaalo ururo ay Maxkamaha isku aragti dhow yihiin sida the Eritrean Islamic Jihad Movement (EIJM iyo the Eritrean National Alliance (ENA).
Abu Bara Hassan Salman oo ah ku xigeenka Eritrean Islamic Jihad Movement mar uu wareysi siinayey Wargeyska Nida�ul Islam ayuu yiri in wadamada Itoobiya iyo Erteria oo shacabkood ugu badan ay yihiin Muslimiin hadana waxaa nasiib daro ah in gacanta loo galiyo jabhado Kiristaan ah si loo caburiyo dadka Muslimiinta ah arintaasna waxaa aad ugu shaqeeyey dowlada Mareykanka markii Mingisto xukunka laga tuuray. Abu Bara Hassan Salman ayaa hadalkiisa raaciyey waan in la helaa dawlada ka dhalato Soomaaliya oo dheeli tirto awooda Geeska Africa.
Fikirka ah in la helo urur ay ku midoowaan garabyada aan kor ku soo sheegnay waxaa wada jir u qabo Midowga Yurub iyo Eritrea iyadoo marna raali ka noqoneyn urur islaami ah waxayna sharuud uga dhigeen hadii ay rabaan in la kaalmeeyo waa in aragtidooda iyo madaxdoodaba wax ka bedalaan.
Hadabo hadii ay dhacdo sida lagu wada in uu dhismo ururkaan aragti noocee ah ayuu shacabka ka qaadanayaa ma waxuu haysanayaa aragtidii hore maxkamadaha iyo garabka Baarlamaanka ka qabeen mise mid ka badelan, so arintan horseed uma noqon karto in la waayo aragti ama muuqaal laga qaato ururkaan. Waxaa xaqiiqo ah in dad badan oo manta sito qoriga lana dagaalamayo Itoobiya kunala dagaalamaya mabda uu aaminsana yahay in uu berto is waydiin karo markuu ururkan midoowo su�aal ah maxaan u dagaalamaya.